नेपाली कामदार जापान पठाउने मोडालिटी आउने वित्तिकै यसरी जान पाइन्छ जापान! – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपाली कामदार जापान पठाउने मोडालिटी आउने वित्तिकै यसरी जान पाइन्छ जापान!
नेपाली कामदार जापान पठाउने मोडालिटी आउने वित्तिकै यसरी जान पाइन्छ जापान!
admin February 7, 2019 समाचार	0
माघ २४, काठमाडौं । जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउने गरी तयारी तीव्र पारिएको छ । आगामी अप्रिलबाट कामदार जापान पठाउने गरी दुबै देशले आन्तरिक गृहकार्य तीव्र पारेका छन् । यसका लागि नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न नेपाल र जापान सहमत भइसकेका छन् । हाल नेपाल कामदार लैजान जापानले पठाउने मोडालिटीको प्रस्ताव कुरिरहेको छ । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहल भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणसहितका विषयमा जापान सरकारले कस्तो संयन्त्र, माडालिटी र विधिहरु प्रस्ताव गर्छ भन्ने विषयको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् ।
यो विषयमा जापानको ठोस प्रस्ताव आएपछि दुई दशेबीच कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर आपूर्तिबारे समझदारी हुने उनले बताए । तत्कालै पाइलटिङका रुपमा अपि्रलबाट कामदार पठाउन सुरु गर्ने योजना बनेको छ । नेपाल र जापानबीच पहिलो चरणमा प्राविधिक समितिबीच वार्ता भइसकेको छ । यसैमार्फत कामदार आपूर्तिबारे छुट्टै समझदारी गरेर जान नेपाल र जापान सहमत भएका थिए ।
यसअघि जिट्कोमार्फत जापानमा सीमित नेपाली कामदार जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । अब यो विधि कस्तो हुने भन्ने विषय जापानले निक्र्योल गरेर कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । सचिव दाहल अब निकट भविष्यमै यस्तो विधि टुंगो लाग्ने बताउँछन् ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।
परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ । पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
पूर्वयुवराज पारस शाह र मोडल सोनीकाको चर्चा धेरै भएपछी पारस पत्नी हिमानीले लेखिन यस्तो भाबुक स्टाटस